WAR DEG DEG AH: John Mahama oo isaga baxay ergayga Midowga Afrika ee Soomaaliya - Axadle - Axadle Wararka Maanta
Accra (Axadle) – Madaxweynihii hore ee Ghana John Mahama ayaa warqad u qoray gudoomiyaha gudiga midowga afrika kana laabtay ogolaanshiyihiisii ​​ergayga gaarka ah ee midowga afrika u qaabilsan soomaaliya
Mahama wuxuu warqaddiisa ku sheegay in ahmiyadda sare ee siyaasadeed ee hawsha laga hadlayo ay u baahan tahay in ergaygu taageero buuxda iyo wada shaqeyn ka helo dhammaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya.
Go’aanka Mahama ayaa yimid ka dib markii dowladda federaalka ay ka hor timid magacaabistiisa, iyadoo sheegtay inuu xiriir dhow la leeyahay dowladda Kenya oo ay ku lug leedahay xiisado siyaasadeed.
Dowladda federaalka ayaa sidoo kale ku sheegtay warqad ay u dirtay Midowga Afrika in kulanka uu isugu yeeray ra’iisul wasaare Rooble madaxda maamul goboleedyada ee ka socda Caasimadda Muqdisho ay ka dhigan tahay in aan loo baahneyn ergay ka socda Midowga Afrika.
Mahama warqad uu u qoray Madaxweynaha Guddiga Midowga Afrika, Moussa Faki Mahamat, wuxuu ku sheegay in taageero la’aanta dowladda federaalka Soomaaliya ay khatar gelin karto howlaha oo dhan, isla markaana ay wiiqeyso rajada adduunku ka qabo nabad ka dhalata Soomaaliya.
Mahama wuxuu sheegay inay ka go’an tahay taageerida aragtida Midowga Afrika ee ku aaddan isku xirnaan, barwaaqo iyo nabad Afrika oo ay ku jirto Soomaaliya.
Ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa Axadle u sheegay in kastoo Midowga Afrika uu diyaar u yahay inuusan ka laaban magacaabista Mahama, Mahama wuxuu xaqiiqsaday inuusan ka shaqeyn karin Soomaaliya ogolaansho la’aan dowladda federaalka.
Ma cadda waxa xiga ee ay qaban doonaan AU, waxaana macquul ah inay sugto inta uu shirku ka furmayo Caasimadda Muqdisho, haddii heshiis la gaarona ma magacaabi doono ergay kale.